Amandla eStirista Igrafu Yawo Yesazisi Esisha eneDatha Yesikhathi Sangempela | Martech Zone
Abathengi bathenga esitolo esiku-inthanethi besuka kwikhompyutha yakho yasekhaya, vakashela ikhasi lomkhiqizo kwesinye isayithi kwithebhulethi, basebenzise i-smartphone ukuthumela ngakho ezinkundleni zokuxhumana bese bephuma bayothenga umkhiqizo ohlobene nse enxanxatheleni yezitolo eseduze.
Konke kwalokhu kuhlangana kusiza ukwakha iphrofayili ephelele yomsebenzisi, kepha zonke ziyizigaxa zolwazi ezihlukile, eziveza okuhlukile. Ngaphandle kokuthi zihlanganiswe, zihlala zinguhlobo lwakho oluhlukile kumakheli aphathekayo, ama-ID wedivayisi, abathengisi bezwe langempela, izitolo eziku-inthanethi, amakhasi wewebhu wokuqukethwe, amadivayisi eselula, ama-laptops, i-TV exhunyiwe, nobunye ubudlelwano oxhumana nabo.
Isixhumi esiphikelelayo njengekheli le-imeyili - imvamisa lisheshiselwa izinhloso zobumfihlo - noma idivayisi ingahlanganisa izingcezu zedatha ezahlukahlukene, idale igrafu yobunikazi ehlanganisiwe emele umbono ophelele womndeni noma womuntu owenza abathengisi bakwazi ukukhomba imikhankaso yabo kangcono izethameli.
Ngaphandle kokuqoqa nokuhlanganisa yonke leyo datha, inselelo enkulu kugrafu yesazisi ewusizo ukuyigcina ingeyamanje. Ngabasebenzisi abaxhumana njalo usuku lonke, kulula ukuthi idatha iphelelwe yisikhathi futhi inganembi.
Kepha manje umhlinzeki wezinsizakalo zokumaketha oqhutshwa yidatha uStirista usephakamise i-ante, ngegrafu yokuqala yesikhathi sangempela emakethe.
Ngenkathi amagrafu omazisi amaningi evuselelwa njalo ezinsukwini ezingama-30 noma ezingama-90, i-OMNA Identity Graph - evuliwe ngu-Stirista ngo-Ephreli - uvuselela njalo ngomzuzwana.
Lokho kuvuselelwa kwesikhathi sangempela kwedatha yobunikazi bomsebenzisi akusiyona into yokunethezeka, kepha kunesidingo. Ukufaneleka komsebenzisi kungumsebenzi oqondile wokunemba kwedatha, futhi okuyisici esiyinhloko ngokunemba ukuvuselela idatha.
Siyaqhubeka nokuzwa kubakhangisi abakhungathekile abathenjiswe ukufinyelela kwimininingwane yezikhathi zangempela zabathengi ukuthola kuphela ukuthi okuningi abakusebenzisayo ukuzibandakanya namakhasimende namathemba amadala, idatha enganembile. I-Stirista iletha emakethe i-OMNA, igrafu yokuqala yesikhathi sangempela, evuselelwa kwesesibili futhi inikeze izinkampani imininingwane abayidingayo ukuze baqonde kangcono amakhaya abo ababhekiswe kuwo - lapho basebenza khona, ukuthi basebenzisa kanjani imali yabo, yimaphi amadivayisi abawasebenzisayo, futhi izindawo abazivakashelayo ngendlela ephephile ehambisana nemfihlo.
U-Ajay Gupta, oyi-CEO yeStirista
Okokuqala, idatha yomsebenzisi ishintsha ngokushesha. Ikheli lomgwaqo, ubunikazi bedivayisi, idatha yokuthenga noma olunye ulwazi lusiza ekuchazeni umuntu noma ikhaya ngezindlela ezihambisana nobumfihlo. Cabanga nje ukuthi kukangaki ngosuku wenza ukukhetha okusha ngokubuka okuqukethwe, ukubuka uhlelo, ukuthenga okuthile, noma ukuvakashela kwenye indawo emhlabeni wangempela.
Okwesibili, indawo yangempela yokufinyelela abantu noma amakhaya ngemiyalezo efanele nayo iyashintsha ngokushesha. Okuphawuleka kakhulu, ikhukhi lomuntu wesithathu liyaphela, futhi ikhono lokukhomba noma lokufaka izikhangiso kumadivayisi eselula liya ngokuya liyinkimbinkimbi. Umugqa wokukhangisa we-TV uyehla, njengoba ababukeli beya kweminye imithombo yokuqukethwe.
Futhi imithetho emisha nokuqwashisa ngobumfihlo bomsebenzisi kwenze imvume yomsebenzisi nokungaziwa kwaba yindawo ephambili yanoma yikuphi ukuqoqwa kwedatha noma ukuphathwa kobunikazi.
I-OMNA ihlanganisa izigidigidi zokusebenzisana ezakha okokuhlonza okungaba ngu-500 kuphrofayela ngayinye. Uma abathengisi befuna ukubhoboza ngaphansi kwe-Identity Graph ephelele, bangafinyelela emagrafu akhona: amakhaya angaphezu kwezigidi ezingama-90 ase-US ku-IP Graph, ngaphezu kwamadivayisi ayi-1 billion axhunywe ku-Device Graph, kanye nedatha mayelana nenhloso yendawo nokunyakaza okuqhubekayo kuvuselelwe ku-Igrafu Yendawo.
Njengoba iningi labakhangisi libona, imininingwane evela kumakhukhi ovela eceleni ibinganembile neze, futhi yahlukanisa abantu kumaphethini wokuphequlula edijithali noma ekusebenzisaneni kohlelo lokusebenza lweselula okungakhombisi izintshisekelo zabo eziphelele.
Ngokuphambene nalokho, idatha yokuqala neyesibili eyakha ingqikithi kumagrafu wobunikazi njenge-Stirista's OMNA iyinquma futhi inembe kakhulu. Njengokuhlanganiswa kokuhlukahluka idatha uqobo, amagrafu anjalo anikeza isithombe esiphelele ngokwengeziwe ngomuntu noma izintshisekelo zomndeni kanye nenani labantu.
Akumangalisi-ke ukuthi igrafu yobunikazi isiphenduke ithuluzi eliyinhloko labakhangisi kule ndawo entsha.
Ingazisa izikhangiso ezilethwa kumndeni onikezwe i-TV exhunyiwe (I-CTVi-ecosystem yokusakaza, ikhebuli, ne-Over-the-Top (Ott) izinsizakalo zokusakaza. Izindawo ze-CTV azikwazi ukufinyelela amakhukhi futhi ziyizingadi ezibiyelwe ngodonga lapho izintshisekelo zesibukeli zinganqunywa ngokuhlanganiswa kwezendlalelo ezahlukahlukene zemininingwane yobunikazi kugrafu yobunikazi.
Igrafu yobunikazi ingahola nokukhangisa noma eminye imiyalezo kumadivayisi eselula amalungu omndeni, noma izikhangiso nokuqukethwe okulethwa kubasebenzisi abagunyaziwe kumawebhusayithi webhrend.
Njengoba kunezinhlobo eziningi zamadivayisi namapulatifomu atholakalayo kubathengi, enye yezingqinamba ezinkulu ezibhekene nabakhangisi ukuletha imiyalezo efanelekile kuzo zonke iziteshi zokuxhumana - kepha ukufaka imvamisa yabo ukuze ababukeli bangazizwa behlaselwa ngamabhomu. Ngokwengeziwe, kunenkinga yokufaka umthelela womlayezo onikeziwe noma umkhankaso ekuthengeni kokugcina, ukuze kuhlolwe ukusebenza kwemali esetshenzisiwe yokukhangisa.
Indlela enhle yokwenza lokho ukuqonda ikhaya noma umuntu kumadivayisi wonkana nasezweni langempela, ngokusebenzisa igrafu yobunikazi ephelele futhi esesikhathini. I-OMNA ivumela ama-brand ukuthi angene ngaphakathi kwedatha yabo yenkampani yokuqala mayelana namakhasimende abo kanye nezivakashi ngamahora angaphansi kwama-24, ukufanisa nokwandisa amaphrofayli ngemininingwane ye-OMNA ukuze umkhiqizo wazi okuningi ngesixuku sawo.
Njengoba ubhadane luyehla, abathengisi manje sebekhuluma ngomhlaba omusha futhi osafufusa wedatha yabathengi. Amagrafu wobunikazi afana I-OMNA zingamathuluzi abalulekile okuzulazula ekuqondisweni nasezidingweni zabakhangisi nokubaluleka kanye nezidingo zobumfihlo zabathengi, ngejubane elibonisa ijubane lempilo.
Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane nge-OMNA
Tags: ajay guptaidatha yokuziphathai-tv exhunyiwectvIdathaidatha yabantuigrafu yobunikaziizithakazeloigrafu yobunikazi be-omnaNgaphezuluidatha yokuthengainhloso yokuthengaI-stiristaizintshisekelo zesibukeli